Alshabaab Oo shaacisay in Weerarkii Paris ahaa mid… - iftineducation.com
Alshabaab Oo shaacisay in Weerarkii Paris ahaa mid…
iftineducation.com – Kooxda Alshabaab ayaa ku ammaantay xasuuqii majaladda todobaadlaha ah ee Charlie Hebdo ee Paris in uu ahaa tallaabo “geesinimo” ah, iyaga oo ku celiyay taageerada ay u hayaan al-Qaacida iyo hoggaamiyihii dhintay ee kooxda Osama bin Laden.
“Labada walaalaha ahi waxay noqdeen kuwii ugu horreeyay ee ka jawaaba aflagaadada nabigeena,” ayay al-Shabaab ku qortay website-ka Radio Andalus-keeda, iyaga oo ka hadlayay labada tuhmane ee la rumeeysan yahay in ay mas’uul ka yihiin weerarka. “Waa tallabo geesinimo leh oo malaayiin Muslimiin ah ka farxisay.”
“Dadka qaar Alle baadiyeeyay ayaa ku andacoonaya in weerarka lagu qaaday majallada uu ahaa mid lagu qaaday warbaahinta iyo xoriyadda hadalka, waxayna sheegeen in aflagaadada nabiga ay qayb ka tahay xoriyadda hadalka,” ayaa lagu qoray. “Laakiin dad geesiyiin ah oo aan waxba ka soo qaadin andacadaas ayaa u aaray nabigeenna oo gooyay madaxa kufaarta ku xadgudbay Nabi Muxamed.”
Maleeshiyada Shabaab ayaa intaa raacisay in Osama bin Laden uu u sheegay Galbeedka in “haddii cabbiraadda ra’yigu uunan xuduud lahayn, markaa waxad diyaar u noqotaan in aad dhabarka u dhigayaan culayska tallaabooyinkeenna”.
Idaacada Andalus waxa uu sidoo kale sheegay in labada walaalaha ah ee la tuhunsanyahay in ay qaadeen weerarka ay “iclaamiyeen in ay ka tirsan yihiin al-Qacida”, oo ah shabakad argagixiso oo ay sidoo kale al-Shabaab ka tirsan yahay, AFP ayaa warisay.
Shabaab ayaa sidoo kale xiriir dhaw la leh dagaalyahannada al-Qaacida ee Yementa dariska ah, halkaa oo mid ka mida labada tuhmne la rumaysan yahay in uu ku soo tababartay.
Kooxda Al-Shabaab ayaa sidoo kale lala xiriiriyay Maxamed Geelle, oo ah nin Soomaali ah oo lagu helay in uu faas ku weeraray ninka sameeya karikateerka ee u dhashay Denmark Kurt Westergaard, oo la kulmay handadaadho dil oo dhawr ah tan iyo markii uu karikateerka sawirka Nabiga Muslimka ee Muxammed lagu soo daabacay wargeeyska maalinlaha ah ee ka soo baxa Denmark Jyllands-Posten 2005-tii.
Xariif Xaaskiisa daqiiqad gudaheed ku waayay Markii shumis ula jeesatay Nin kale -Muuqaal
Gabar Uu shariif Sakiin dhalay Oo qabiil dhan la jartay dhulka -Muuqaal ay soo duubtey